म एक Defibrillator Anundgård (Defibrillator) एक ambulands को पुग्यो अघि हृदय गिरफ्तारी बचाव लागि तैनात. हृदय स्टार्टर Olle Frisk को आपतकालीन मा प्राप्त (को कौसी) alt. टेलिफोन मार्फत. Holm पहिलो दुर्घटनामा मा मुसीबत प्रत्यक्ष सजग गराएका गर्ने स्वीडेन स्वयंसेवकहरु मा निवास प्रयास पनि छ. Holm मा emergencies मा हृदय गिरफ्तारी र मदत बारे जान्नुहोस्, holmbygden.se/akut.
Rektor रय Resare 060- 658 33 01, 073-275 29 83 roy.resare@sundsvall.se (शिक्षण f.n. Liden सारियो)
पूर्वप्राथमिक निर्देशक Peder Söderman 060-658 32 80, peder.soderman@skola.sundsvall.se
Omkörningsförbud på sträckan Tönn... थप पढ्नुहोस्
3/4: टोलीमा स्वागत ...